China Thermal Bag orinasa sy mpamatsy | Huizhou
Ny kitapo hafanana, araka ny anarany, dia fitoeran-javatra mafana sy voasesika, ary be mpampiasa amin'ny insulate ny faritra anatiny ny kitapo avy amin'ny tontolo ivelany tena izy, malemy fandefasana rivotra mafana sy mangatsiaka. Izy io dia miasa mba hitazomana ny hatsiaka na ny hafanana. Mandritra izany fotoana izany ny fitaovana mafana ampiasaina sy malefaka ary marefo, ka manome fiarovana maro ny vokatrao.
1.Ny kitapo mafana, araka ny voalazan'ny anarana, dia fitoeran-javatra mafana sy voaroaka, ary be mpampiasa amin'ny insulate ny faritra anatiny ny kitapo avy amin'ny tontolo ivelany tena izy, malemy fandefasana rivotra mafana sy mangatsiaka. Izy io dia miasa mba hitazomana ny hatsiaka na ny hafanana. Mandritra izany fotoana izany ny fitaovana mafana ampiasaina sy malefaka ary marefo, ka manome fiarovana maro ny vokatrao.
2. Amin'ny ankapobeny, ny kitapo mafana iray dia misy sosona telo, izany hoe ny ampahany anatiny, ny fitaovana afovoany mafana ary ny akorandriaka ivelany. Miorina amin'ny fampiharana samihafa toy ny ronono, mofomamy, hena ary fivarotam-panafody, afaka manana endrika hafa ianao. Ary ny kojakoja hafa toy ny zip, pirinty, hisintona sns, dia misy amin'ny safidinao malalaka.
3.Raha kitapo mafana no ampiasaina amin'ny fanaterana fanafody, dia mety mila mpanara-maso ny mari-pana ianao. Na kitapo mafana sasany natao ho an'ny fonosana indray mandeha.
Ny kitapo misy herinaratra dia matetika ampiasaina amin'ny fonosana gilasy na biriky ranomandry mba hanaovana fonosana fifehezana hafanana mitambatra (hafanana mitahiry na hafanana mitaingina) ho an'ny fitaterana rojo mangatsiaka.
1.Huizhou Thermal Bag dia novolavolaina mba hitazomana ny hatsiaka na ny hafanana ao anaty kitapo amin'ny alàlan'ny fisisahana amin'ny tontolo ivelany, mitazona ny mari-pana tsy miova mandritra ny fitaterana. 2. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny fitaterana vokatra vaovao, mora simba ary mahamay, toy ny: hena, hazan-dranomasina, voankazo & legioma, sakafo voaomana, sakafo mangatsiaka, gilasy, sôkôla, vatomamy, mofomamy, mofomamy, fromazy, kosmetika, ronono, fanafody sy sns, raha fintinina, indrindra ny vokatra mifandraika amin'ny sakafo sy ny fanafody.
3.Ny kitapo mafana dia natao toy ny ondana sy ny insulator manohitra ireo karazana famindrana hafanana, conduction, convection ho an'ny vokatrao rehefa mandefa.
4.Ny kitapo hafanana no ampiasaina amin'ny fandefasana rojom-bary mangatsiaka na mafana foana. Na ho an'ireo hetsika fampiroboroboana vokatra mora tohina izay ilanao kitapo tsara tarehy iray nefa miaraka amin'ny vidiny ambany miaraka amin'ny vokatrao.
5.Ny kitapo mafana dia matetika ampiasaina amin'ny fonosana vata fampangatsiahana hafa, toy ny fonosana gilasy misy antsika sy ny biriky gilasy.
Landihazo perla EPE,
Landihazo perla EPE
Foil avo lenta
Fanamarihana: Safidy namboarina no misy.
1.Multi fiarovana sy fahombiazana avo lenta ho an'ny vokatrao mba hafana na hatsiaka ihany
2. Ampiasaina amin'ny toe-javatra fanaraha-maso maripana marobe, indrindra amin'ny sakafo sy ny fanafody
3.Collapsible hamonjy toerana sy ho mora fitaterana.
4.Can ho mix-match, fitaovana samy hafa misy mifanaraka amin'ny vokatrao.
5. Tsara indrindra ho an'ny sakafo sy ny fandefasana rojom-bolo mangatsiaka
1.Ny fampiasana mahazatra ny kitapo mafana dia ny fandefasana rojom-bolo mangatsiaka, toy ny fanaterana sakafo vaovao, sakafo entina na fanafody fanafody hitazomana ny hafanana manodidina.
2. Na amin'ny hetsika fampiroboroboana toy ny fampiroboroboana hena, ronono, mofomamy na kosmetika, izay ilanao fonosana fanomezana tsara tarehy iray izay mandeha tsara amin'ny vokatrao nefa ambany ny vidiny.
3. Izy ireo dia azo ampiasaina miaraka amina fonosana gilasy, biriky na ranomandry maina ho an'ny fandefasana vokatra mitaky amin'ny hafanana efa voafaritra mandritra ny fotoana maharitra.
4.Ny kitapo mafana dia vokatra novolavola tsara azonay atao mba hanolorana safidio isan-karazany ho an'ny tanjonao samihafa.
Teo aloha: Vata mangatsiaka plastika
Manaraka: Voaravaka Box Liner